‘लक डाउन’ मा सामाजिक सञ्जाल : मानसिक रोग बन्न सक्छ – Health Post Nepal
‘लक डाउन’ मा सामाजिक सञ्जाल : मानसिक रोग बन्न सक्छ
२०७६ चैत १७ गते ८:५९
तीनदिन कुरेपछि भारततिरै फर्काइयो १० दिने सुत्केरीसहित नेपालीलाई
सरकारलाई गाली पनि गर्ने, अनि भनेको पनि नमान्ने?
कोरोना कहर : इरानी सर्वाेच्च नेताका सल्लाहकारको मृत्यु
बिपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु
कोभिड-१९ महामारी मध्यनजर राख्दै देश पूर्णरूपले ‘लकडाउन’ को अवस्थामा छ। हाम्रो जीवनशैली केही समयका लागि बदलिन बाध्य बनेको छ। हरेक दिनको कार्यशैलीबाट केही समयका लागि हामी सबै वञ्चित छौं।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला हामी सबै समाजिक जमघट गरेर आफ्नो घरबाट टाढा बस्न बाध्य बनेका थियौं तर आज हामी सबैजना यस्तो प्रकोपमा परेका छौं कि न हामी सामाजिक जमघटमा बस्न पाउँछौ न आफ्नो घरबाट बाहिर जान। नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले हाम्रो जीवन नै अनिच्छित बनाइदिएको छ।
के हो होम क्वारेन्टाइन र यो किन जरूरी छ?
देश पूरा लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यसैले हामी सबैले आफू अनि आफ्नो समाज बचाउने हेतुले क्वारेन्टाइनमा बस्न एकदम जरुरी छ। केही समयका लागि आफू भौतिक रूपमा समाजबाट टाढा भई आफ्नो घरमा नै बस्नुलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ। सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको आइसोलेसनको स्टेज हो।
स्वस्थ अनि अस्वस्थ दुवै व्यक्ति होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आवश्यक छ। जसमा कोरोना पोजेटिभ देखिन्छ ती व्यक्ति सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ। जो अस्वस्थ हुन्छ ती सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न जरुरी हुन्छ अनि जो हेर्दा स्वस्थ देखिन्छ उनीहररूले कति बेला भाइरसको क्यारियर (Carrier) बन्दछ थाहा हुन्न। त्यसैले शारीरिक रूपमा स्वस्थ मानिस पनि क्वारेन्टाइनमा बस्दछन्।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन सरकारले देशलाई लकडाउनमा राखेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आह्वान गरेको हो। होम क्वारेन्टाइनमा बस्नाले रोग फैलिने मात्रा कम हुन्छ।
त्यही भएर यदि हामी सबै देशलाई महामारी प्रकोपबाट बचाउन समाजिक दुरी (social distancing) लाई मर्यादित रूपले अपनाउने हो भने आइपर्ने ठूलो सङ्कट भने पक्कै पनि झेल्नुपर्दैन। होम क्वारेन्टाइन र सेल्फ क्वारेन्टाइनले रोग फैलिन कम गर्छ। त्यसैले आफू पनि बच्न र समाजलार्इ र देशलाई पनि बचाउन सबैजना होम क्वारेन्टाइनमा बस्न जरुरी छ।
होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा के के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ?
– सबैभन्दा जरुरी भनेको व्यक्तिगत स्वच्छता (personal hygiene) लाई एकदम ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
– अतिआवश्यक काम नपरेसम्म घरबाट कदापि पनि बाहिर निस्कनु हुँदैन।
– सकेसम्म यस्तो बेलामा पाहुनालार्इ निमन्त्रणा पनि नदिने अनि आफू पनि कसैको घरमा पाहुना लाग्न जानु हुँदैन।
– कुनै पनि प्रकारका सामाजिक जमघट वा भेलामा सहभागी हुनुहुँदैन।
– सकभर अरूसँग अन्तक्र्रिया गर्नुहुन्न । गर्नै परेछ भने पनि कम्तिमा तीन फिट दुरी राख्न आवश्यक छ।
– नजिकै हिँडडुल गर्ने तर कसैसँग गफ नगर्ने।
– पोषिलो खानेकुरा खाने जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन मद्दत पुर्याओस्। सन्तुलित खानेकुरा खाने, आफूलाई मनपर्ने सङ्गीत सुनेर आनन्द लिने गर्नुपर्छ।प्रशस्त मात्रामा शुद्ध पानी पिउने।
– आफ्नो शरीरको तापक्रम बेलाबेलामा मापन गर्ने।
– आफ्नो फूलबारीमा काम गर्ने, घर सफा राख्ने, व्यायाम गर्ने, आफ्नो घरको छतमा बस्ने गर्न सकिन्छ। आफू बसिरहेको वरपर सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ।
– होम क्वारेन्टाइनको समयमा आफूलाई माया गर्ने, आफूलाई मनपर्ने आफन्तजन तथा साथीभाइसँग फोन सम्पर्कमा रहनुपर्छ।
– लकडाउन तथा होम क्वारेन्टाइनको समयमा मानसिक रूपमा पहिल्यैदेखि कमजोर व्यक्तिलाई एक्लै छाड्नु हुँदैन।
– लकडाउनको समयमा घरमा बस्दा वा होम क्वारेन्टाइनको समयमा एकान्तमा बस्दा दैनिक क्रियाकलापलाई मित्र बनाउनुपर्छ।
होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा सामाजिक सञ्जालले मनिसमा पर्ने प्रभाव?
हालको स्थितिमा बच्चादेखि बुढाबुढीसम्म जोकोहीको पनि मुख्य साथी टिभि ,मोबाइल फोन, ल्यापटपजस्ता उपकरण बनेका छन्। सामजिक सञ्जाल नै हरेक मानिसको दिन काट्ने माध्यम बनेको छ। यो समयमा मिडियाको प्रयोग एकदम बढेको सहजै देखिन्छ। हाम्रो घरसंसार नै हालको सन्दर्भमा इन्टरनेटमा गोलगोल घुमेको छ। मिडियाको प्रयोगले व्यक्तिमा सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै असर गर्दछ।
मानिस एक सामाजिक प्राणी हो। त्यसैले सामजिक मेलमिलाप, समाजबाट टाढा बस्नु भनेको एक तरिकाले मानिसका लागि एकदम असहज हुन जान्छ। कुनै न कुनै रूपले समाजसँग आफूलाई मानिसले जोडिराखेका हुन्छ। जब समाजसँग जोडिनबाट वञ्चित बन्छ त पक्कै पनि कतै न कतै कुनै न कुनै रूपले नराम्रो असर गर्छ। अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको बेलामा मानिसलाई भौतिकरूपमा नभए पनि इन्टरनेटले सामाजिक सञ्जालले समाजसँग जोड्न सहज बनाएको छ।
अहिलेको सन्दर्भ नियाल्ने हो भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले सबैलाई आफ्ना विदेश वा स्वदेशमा भएका साथीहरू, परिवारका सदस्यबीच कुराकानी गर्न सजिलो बनाएको छ। जसले गर्दा मानिस एक्लोपनको सिकार हुनबाट बचेका छ्न्।
इन्टरनेटबाट नयाँनयाँ कुरा सिक्ने, विभिन्न चलचित्र हेर्ने पाएका छ्न्। विभिन्न नयाँ सीप सिक्ने, मिठा परिकार युट्युबमार्फत् सिक्ने गर्छन्। हरेक दिनका क्वारेन्टाइनमा आफूले गरेका क्रियाकलाप इन्स्टाग्राम ,फेसबुकमा राख्ने जसले गर्दा कसले के गरेर आफ्नो दिन बिताइरहेको छ देख्न पाइन्छ।
विश्वमा भइरहेका हरेक कुरा मिडियामार्फत् सबैले थाहा पाइराखेका छन्। मानिसका लागि फेसबुक, टिकटक मनोरञ्जन दिने माध्यम बनेका छन् जसको सहायताले मानिसले आफ्नो मुड फ्रेस बनाउन सकेका छन्। समाजिक सञ्जाल नै हालका लागि मानिसलाई समाजसँग जोड्ने माध्यम बनेको छ। विभिन्न पुराना फोटो हेर्ने, फोटोको वर्णन गर्नेजस्ता कुरा देख्न सकिन्छ।
नेतादेखि कलाकार सबैका लागि मिडिया नै दिन बिताउने आधार भएको छ। कोरोनाका बारेमा विभिन्न आवश्यक जनचेतनामूलक कुरा गरेका विभिन्न भिडियो देख्न सकिन्छ। जुन कुराले मनिसलाई हरसमय कोरोना भाइरसबारे सचेत रहन दिमागको ढोका ढकढक्याइरहन्छ।
इटरनेटमार्फत् मानसिक तथा शारीरिक रूपमा आनन्द दिने मेडिटेसन वा ध्यानका सङ्गीत सुन्ने बानीको विकास गर्न सकिन्छ। युट्युबको प्रयोग गर्दा हँसाउने अनि ऊर्जाशील बनाउने भिडियो हेर्न सकिन्छ, जसले हामीलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउँछ।
नकारात्मक खालका समाचारले मनलाई विचलित बनाउन सक्छ। बढी निराशा पैदा गर्ने खालका समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यमको भर पर्नाले हामी मानसिक रूपमा कमजोर बन्दैछौं।
मिडियामा प्रस्तुत भएका सबै समाचार सही हुँदैनन्। कुनै गलत पनि देखिएको छ। त्यस्तो गलत समाचारका कारण मानिसमा डर बढ्नुका साथै कोरोनाका बारेमा फैलिएका अनेकौं भ्रामक खबले मानिसमा तनाव बढ्न सक्छ। कोही कोही व्यक्ति डिप्रेसनको सिकार बन्न सक्छ्न्।
नकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने इन्टरनेट धेरै मानिसमा लत बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन। जसको कारण व्यक्तिमा smart phone addiction, internet addiction जस्ता मानसिक समस्या देखापर्नसक्छ।
म घरमै बस्ने त हो भन्ने मनस्थितिले गर्दा रातभर सामाजिक सञ्जालमा भुल्ने बानी धेरैमाझ देखिन्छ। जसले गर्दा बिहान एकदम ढिलोसम्म सुत्ने, दिउँसो धेरै सुत्ने बानी मानिसमा बढ्न सक्छ। जसको कारण मानिसको सुत्ने शैली नै परिवर्तन हुन्छ। त्यसबाट ती व्यक्तिमा विभिन्न sleep disorder देखापर्नसक्छ।
जो व्यक्ति पहिले नै कुनै प्रकारका मानसिक समस्याबाट गुज्रिइसकेका हुन्छन्, तिनीहरू सामाजिक सञ्जालमा राखिएका अनावश्यक समाचारले झन् बढी मात्रामा त्रसित बन्दछन्।
जब नेपालमा फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पाइएको थियो, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालले सोही जहाजमा आएका व्यक्तिहरूको नाम, ठेगानासमेत खुलाएको पाइएको थियो। जुन समाचारले ती व्यक्तिमा मानसिक रूपमा कतिसम्म असर परेको होला अन्दाज पनि लगाउन सकिँदैन।
त्यसैले सामाजिक सञ्जाललमा फैलिने यस्ता समाचारले मानिसमा त्रास झन् बढ्छ। जसले व्यक्तिमा विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्या आउँदछ।
सामजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले बच्चामा पनि असर गर्न सक्छ। जसले गर्दा antisocial behavior को विकास हुन सक्दछ। त्यसबाट conduct disorder देखिन सक्दछ।
त्यसैले यो लकडाउनको अवस्थामा हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न एकदम जरुरी छ। समाजिक सञ्जालको उपयोग बुद्दिमानी ढंगले गर्नुपर्दछ। इन्टरनेट नहुने भए यस्तो हालतमा हामी मानसिक रूपमा कमजोर हुन सक्थ्यौं। यसको उपयोग राम्ररी गर्ने हो भने हाम्रो यो क्वारेन्टाइनको समय एकदम फलदायी बन्न जान्छ ।
समाजिक सञ्जाललमा भएका कुन कुरालाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने भन्ने कुरा आन्दाज गरी एक उपयुक्त समय छुट्ट्याएर सामाजिक सञ्जालमा व्यतित गर्ने हो भन्ने हामीले कुनै पनि कठिनाइ भोग्नु पर्दैन।
त्यसैले सन्तुलित, सही, आसा जगाउने खालका सामग्रीहसहित भरपर्दो जानकारी दिने सञ्चारमाध्यम, जस्तै अनलाइन, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने गर्नुपर्छ। यस चिन्ताजन्य समयमा सञ्चारमाध्यमा आएका कस्ता सामाचार सुन्ने पढ्ने भन्नेबारे विचार पुर्याउनुपर्छ। यसरी घरभित्र बस्दा जुनबेला पनि समाचार पढ्न, हेर्न र सुन्न हुँदैन। त्यसका लागि समय छुट्ट्याउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा मन विचलित बनाउने समाचार भिडियो पोस्ट गर्नेलाई अनफलो गर्नुपर्छ।
Tags: ऋचा खड्का, काेराेनाभाइरस